Tsy mampino! Toe-javatra 10 rehefa maty ny tany
Amin'ny fotoana rehetra dia misy ny loza mety hitranga amin'ny fisian'ny olombelona, ​​ohatra, ny fipoahan'ny onjam-peo iray eny an-tany na ny fipoahana baomba atomika dia hipoaka. Ireo toe-javatra tena mampidi-doza ireo dia efa napetraka mihoatra ny indray mandeha.
Ny faran'ny tontolon'ny taona dia nitatitra fa saiky isan-taona, saingy vitsy no mahalala fa misy toe-javatra marobe tena mampidi-doza, rehefa ho mafy be ny zava-drehetra. Andeha hojerentsika akaiky ny tranga apokalyptika rehefa velona ny olombelona, ​​na dia eo aza ny faminaniana ratsy.
1. Ny Ady Lehibe Faharoa
Ny tsy fifankahazoan-kevitra nitranga tamin'ny 1962 dia mety hitarika ho amin'ny vokadratsy tsy hay ambara. Ity toe-javatra ity dia nantsoina hoe krizin'ny balafomanga Kiobana. Tao amin'ny fiaramanidina tao Duluth, hitan'ireo mpilalao hafahafa hafahafa nanandrana nihanika ilay fefy. Mba hampatahotra azy, dia nisy tifitra fampitandremana maromaro nipoaka teny amin'ny rivotra, izay nampihetsika ny fanairana fanindroany, ary nahatonga fihetsiketsehana an-tsokosoko tany amin'ireo toby teo akaiky teo. Fanairana iray tao amin'ny tobim-piaramanidina Volk Field no nahatonga ireo baomba nokleary nalefa any an-danitra, izay tokony hitokona ny faritanin'i Rosia. Tsara ny nampandrenesina azy ireo tamin'ny alàlan'ny fanairana diso. Nipoitra tampoka ny ady tamin'ny Ady Lehibe Faharoa.
2. Manakana ny fifandonana amin'ny goat
Tamin'ny 1983, rafitra fampitandremana fohy ho an'ny fanafihana basy dia nahatsikaritra fa nisy balafomanga ballistane iraisam-pirenenana mikendry ny Firaisana Sovietika dia natomboka tany amin'ny faritr'i Amerika. Tamin'ity indray mitoraka ity dia i Stanislav Petrov, manamboninahitra mpiandraikitra, no tompon'andraikitra ary nilaza fa fanairana diso izy io. Nanazava izy fa raha nisy ny fanafihana tena izy, dia nasehon'ireo fitaovana ireo fa nisy ny balafomanga an-jatony maro i Amerika fa tsy dimy. Noho izany, i Petrov dia nanakana ny fiparitahan'ny ady. Etsy ankilany, ny fehin-kevitra dia vokatry ny fifandimbiasan'ny tara-masoandro amin'ny rahona eny amin'ny habakabaka.
3. Ny fianjeran'ny Tenduska meteorita
Tamin'ny taona 1908, nisy tranga izay mety hitarika fahafatesan'olona marobe, saingy misaotra an'Andriamanitra ny zava-drehetra. Mino ny mpahay siansa fa nisy kintana iray na kintana iray nirodana teo akaikin'ny tany, ary izany dia nitarika ho amin'ny fipoahana tamin'ny alalan'ny hery goavana izay nandondona ny ala 2 000 m2 tany Rosia. Tsara ny manamarika fa ny herin'ny fipoahana dia avo in-1.000 mahery noho ny baomba atomika nipoaka nanerana an'i Hiroshima ary nahafaty olona maherin'ny 160.000.
4. Ny fandrahonana avy amin'ny satelita momba ny tany
Tamin'ny taona 1960, dia nanomboka tonga tao amin'ny toeram-ponenan'ny radar tao Greenland ny famantarana fa nisy fanafihana nokleary natao tamin'i Amerika. Vokatr'izany dia niasa hiady tamin'ny famotsorana ireo mpiadina NORAD. Ny fisalasalana mikasika ny tena zava-misy amin'ny fanafihan'ny USSR dia vokatry ny hoe tamin'ny fotoana nitsidihany ny toeran'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany tany Amerika. Taorian'ny fanamarinana, dia hita fa tsy diso ilay mari-pamantarana, ary nahatonga izany ny volana ambony. Noho izany dia lasa lasibatry ny ady nokleary ny satelitan'ny Tany.
5. Kometsa mampidi-doza
Tamin'ny taona 1883 dia nisy astronoma avy any Meksika Jose Bonilla nitarika fandinihana ary nahitana manodidina ny 400 manga sy marevaka zavatra izay niampita ny Masoandro. Izy ireo dia sombin-ketsa iray, ary ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia mihoatra ny 1 lavitrisa taonina. Nisy ny taha-marika avo lenta nananan'ireo tapa-bolana ireo tamin'ny tontolon'ny baomba sy ny bombe. Milaza ny mpahay siansa fa mety hitarika amin'ny fandringanana ny fiainana eto an-tany izany. Etsy ankilany, ny ketsa amin'io habeny io dia nahatonga ny fanjavonan'ny dinosaures. Araka ny antontan-kevitra azo alaina, ny sombiny mampidi-doza indrindra amin'ny ketsa dia nandeha lavidavitra kely lavitra ny tany.
6. Asclepius mitebiteby
Tamin'ny taona 1989, nanakaiky ny tany nanodidina ny Tany dia nanatona ny asterôdy, izay nantsoina hoe - (4581) Asklepiy. Alao sary an-tsaina hoe, nidina nanerana ny toerana iray izay 6 ora lasa izay ny planeta. Raha mitranga ny fifandonana, dia mitovy amin'ny fipoahana baomba kitroka kobam-panafody manana 600 metatra. Zavatra hafa mahaliana: Ny haavon'ny holatra holatra noforonin'ity fipoahana ity dia ho avo fito heny noho ny Everest.
7. Lozam-piaramanidina nahatsiravina
Ny zava-doza dia nitranga tamin'ny taona 1961, raha nianjera tany amin'ny rivotra ny bomber B-52, izay nahitana baomba nokleary roa. Ny baomba baomba dia 8 Mt, ary ny herin'ny fandringanana isaky ny avo roa heny noho ny an'i Hiroshima. Ankoatr'izany, raha nitsoka ny rivotra, dia afaka nandrakotra ny metropole lehibe - New York ny taratra. Nianjera tao amin'ny faritanin'i Caroline Avaratra ilay fiaramanidina. Rehefa nitranga izany dia nolavin'ny governemanta Amerikana fa mety ho tratran'ny fipoahana nokleary, saingy tamin'ny taona 2013 dia nanambara ny fampahalalam-baovao fa mbola mety hipoaka ny baomba iray. Najanona io loza io noho ny fiakaran-tsetroka tsotra.
8. Ny loza 2012
Araka ireo faminaniana Maya, ny taona 2012 dia ho tonga ny faran'izao tontolo izao, ary maro an'isa no nino an'io vaovao io. Mahaliana fa tena nisy tokoa ny fandrahonana. Tamin'ny jolay, nisy ny fipoahana plastika tsy misy latabatra voarakitra tao amin'ny Masoandro, izay nandalo nanerana ny angonina ety an-tany izay toerana niavian'ny planeta sivy andro lasa izay. Mino ny mpahay siansa fa raha mamely ny tany ny plasma, dia mety hanimba fitaovana elektronika izy, ny famerenana amin'ny laoniny ny fotoana sy ny vola. Ny fahasimbana amin'izany dia ho goavana.
9. Ny loza ateraky ny ady nokleary
Nandritra ny krizin'ny balafomanga Kiobana, izay efa voalaza tato ho ato, ny sambo avy amin'ny tafika an-dranomasina amerikana dia nahita sambo maromaro, tsy nahatafiditra ny ekipany. Mba hisarihana ny sain'ny besinimaro dia nanomboka nandefa baomba goavana ny sambo Amerikana, ka nahatonga ny fiaramanidina B-59 hitsangana. Ny Amerikanina dia tsy nahalala fa nisy ny torpedo nokleary tao amin'ny onjam-peo, izay nitovy tamin'ny hery baomba nipoaka nanjo an'i Hiroshima. Nieritreritra ny manamboninahitra teny amboara fa voatafika izy ireo, ka nanapa-kevitra ny hanomboka ny torpedo. Olona telo no nandray anjara tamin'ny fifidianana, ny iray dia nanohitra ary naharesy lahatra ny kapiteny fa tsy fanafihana izany, ary ilaina ny miseho.
10. Fandaharam-pianarana tsy ara-dalàna
Tamin'ny NORAD tamin'ny taona 1979, ireo mpandahateny dia nanao fitsapana - simulam-panitsiana noforonina avy amin'ny fanafihan'ny Sovietika. Tsy nisy nihevitra fa ny fifandraisana amin'ny ordinatera NORAD no nahatonga ny ordinateran'ny solosaina. Vokatr'izany, nisy tatitra diso momba ilay fanafihana dia nafindra tany amin'ny rafitra fiarovana rehetra any Amerika. Efa niarina ireo mpiady tamin'io fanafihana io, saingy nampitandremana ny Ady Lehibe Faharoa.
Inona ny anaran'i Veronica?
Ambasadin'i Danemarka ao Rosia
Ny dofin'i Edison no hany fomba tena ahafahana mifandray amin'ny fanahy
Ambasadin'i Barbados any Belarosia
Inona no atao hoe Eugene
Ambasadin'ny Vatikana any Belarosia
Ambasadin'i Però ao Rosia
Iza ny anaran'i Yuri?
Reproduction de Kalanchoe
Pyoderma amin'ny alika
Ahoana no hankalaza vehivavy 30 taona?
Mipetraka ny placenta
Fanamboarana trano fidiovana ao Khrushchev
Skateboard ho an'ny mpandray anjara
Fandevenana baolina mody - ireo modely maoderina indrindra sy ny fomba tokony hitondrany azy ireo?
Ny Foibe ara-kolontsaina ao Recoleta
Hairstyle ho an'ny volo miditra 2014
Ahoana no hanamboarana roze saline mozika?
Kalandrie fianarana - ahoana no hamahana ny lahy sy ny vavy?
Cristiano Ronaldo nanamafy ny maha-bevohoka an'i Georgina Rodriguez
Inona avy ireo asan'ny sela lahy sy vavy?